Pacman 🥇 Emulator.online ▷🥇
စွန်များကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းတွင်ကစားရန်, သင်ရုံရှိသည် ဤညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်နာပါ:
သင်နှစ်သက်သောဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ဂိမ်းဆိုက်သို့သွားပါ Emulator.online ။
သင်ဆိုက်ထဲဝင်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်သာလုပ်သင့်သည် play ကိုနှိပ်ပါ ပြီးတော့သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော configuration ကိုစတင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျဂိမ်းတစ်ခုအနိုင်ရပြီးတာနဲ့သင်အဆင့်အထိနိုင်ပါတယ်။ စုစုပေါင်းနှစ်ဆယ်လေးပါးအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်.
ဂိမ်းတစ်ခုဖြည့်ပြီးနောက်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြန်စတင်သည်" စတင်ရန်။
Pac-Man သည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှလူကြိုက်များသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်ခဲ့သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မေလ ၂၂ ရက်တွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းများဖြင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဒီဂိမ်းဟာယူအက်စ်ကို ၅ လအကြာမှာရောက်သွားပြီးကူးယူရောင်းချတဲ့အမှတ်အသား ၁၀၀,၀၀၀ ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိခဲ့တယ်။
Arcade ဗားရှင်းအပြင် Pac-Man သည် Atari ၂,၆၀၀ အတွက်လည်းအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခဲ့သည်။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာဒီဂိမ်းဟာခေတ်မီ console တွေအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ version များစွာနဲ့များစွာရရှိခဲ့တယ်။ ဘရာဇီးတွင် Come-Come ဟုလူသိများလာသည့်ဇာတ်ကောင်လည်းအောင်မြင်ခဲ့သည်။
အရာတစ်ခုစီ၏အထက်တွင်ဂိမ်း၏စိတ်ကူးသည်ဝင်္ကပါတွင်တက်ဘလက်များစားနေသောအဝါရောင်ဇာတ်ကောင်ကိုကြီးကြပ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကစားသမားသည်သူ့ကိုရှုံးနိမ့်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်ကစားသမား (၄) ဦး မှလွတ်မြောက်ရမည်။
Namco သည်သေနတ်သမားဂိမ်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းကိုတချိန်တည်းမှာလိုချင်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် Iwatami သည်သူသည်အချပ်မပါသည့်ပီဇာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်ဇာတ်ကောင်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုရှိသည်ဟုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သို့သော်ဇာတ်ကောင်၏မူလရင်းမြစ်သည်အခြားမူကွဲများလည်းရှိသည်။ Iwatami ကိုယ်တိုင်ပြောသလို ၏အသွင်အပြင် စွန် ဂျပန်စာလုံး "kuchi"၊ ပါးစပ်ဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်.
အဖြစ်မကြာမီကဖန်တီးခဲ့သည်အဖြစ်, ဇာတ်ကောင်အဖြစ်လူသိများခဲ့သည် စွန်။ ဂျပန်၌ puck နှင့် pac စာလုံးပေါင်းများသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်၏ဒဏ္ologyာရီအရ Paku တွင်အလွန်စားချင်စိတ်ရှိကြောင်းလူသိများသည်။ ထို့အပြင်၎င်းစကားလုံးသည်အစာစားချိန်တွင်ပါးစပ်ကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်ရန် onomatopoeia ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Puck ဟူသောစကားလုံးသည်အင်္ဂလိပ်လို taco လိုအသံထွက်နေသည်။ ဒီဂိမ်းကိုယူ။ အက်စ်။ ယူလာတုန်းက Namco က Pac-Man လို့ခေါ်တယ်။
၎င်းကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်းအမေရိကန်သို့ရောက်ရှိခြင်းဖြင့်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုတွင်အမှတ်အသားပြုခဲ့သည်။ ဂိမ်း၏အောင်မြင်မှုရုံအတွက်အံ့ဖှယျဖြစ်ခဲ့သည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထုတ်ဝေမှုသည်ဒေါ်လာဘီလီယံအထိရရှိခဲ့သည်သာအမေရိကန်ရှိဂိမ်းခန်းထဲမှာ။
လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးတန်ဖိုးသည်နှစ်ဆကျော်တက်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်၌ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘီလီယံ (၁၃) ဘီလီယံနီးပါးစုဆောင်းရရှိထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမြတ်အစွန်းအများဆုံးစာရင်းတွင် Space Invaders (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံနီးပါးခန့်) ဖြင့်သာလွန်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
Arcade တွင်ပထမဆုံး version ဖြစ်သော Pac-Man သည်နောက်ဆက်တွဲ (၃၀) ကျော်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဇာတ်ကောင်နေဆဲသူ၏ဂိမ်းကျော်လွန်သွားသောဂိမ်းများအတွက်ပွဲစေသည်။ Super Smash Bros တွင်ဥပမာအနေနှင့်အဝါရောင်ဘောလုံးကိုတိုက်လေယာဉ်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
စွန် အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထားတဲ့အီလက်ထရောနစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် Tōru Iwatani ကုမ္ပဏီသို့ Namco။ မူလက Arcade အတွက် ၁၉၈၀ တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ယနေ့ခေတ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးသောဂိမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ခေတ်မီသောဗားရှင်းများနှင့်အခြားပစ္စည်းများအတွက်နောက်ဆက်တွဲများဖြစ်သည်။
ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်: ကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် ပါးစပ်နှင့်အတူ ဦး ခေါင်းပတ်ပတ်လည် ဒါကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်, တက်ဘလက်များနှင့်ပြည့်ဝ၏ရိုးရှင်းသောဝင်္၌ထားနှင့် သူ့ကိုသရဲခြောက်တယ်လို့လေးမျိုး။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည် သရဲတစ္ဆေများမခံရဘဲတက်ဘလက်တိုင်းကိုစားပါရှုပ်ထွေးတဲ့တိုးတက်သောနှုန်းမှာ။
Pac-Man သည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကဗီဒီယိုဂိမ်းစက်များတွင်အချစ်ဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံးဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကိုသက်သေပြခြင်းသည်၎င်း၏ကစားနည်းများကိုတောင်မှမကစားခဲ့သည့်အငယ်ဆုံးသူများပင်လျှင်ရေပန်းစားသည်။
အကယ်၍ သင်ဟာဒီလောဘကြီးတဲ့အဝါရောင်ဇာတ်ကောင်ကိုနှစ်သက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သူရဲ့ franchise အကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးအဖွဲအချို့ကိုကြည့်ပါ။
ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖြစ်ပါသည် ၀ တ္ထုများမရိုက်ဘဲဝင်္ကျားနံရံတစ်ခုချင်းစီကိုစားပါ။ သင်တစ် ဦး တက်ဘလက်နှင့်အတူတိုက်မိတဲ့အခါ စွန် အဲဒါကိုမျိုချပြီး labyrinth ကနေပျောက်ကွယ်သွားရမယ်။ အကယ်၍ ကစားသမားသည် ၀ င်္ကပါအကွက်တစ်ခုချင်းစီကိုစားလျှင်ကစားသမားသည်စင်မြင့်ကိုကျော်သွားသည်။ အကယ်၍ ကစားသမားသည်စားပွဲတစ်လုံးစီ၌အသီးအသီးနှင့်အသီးအသီးကိုစားပါကအခမဲ့ဝင်္ကူတစ်ခုချင်းစီကိုစားပါကသူသည်အနိုင်ရရှိသည်။
အသုံးပြုသူကထိန်းချုပ်ထားတစ်ခုတည်းသောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်ကြသည် ဘေးပတ်လည်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့တက်ဘလက်တွေကိုအစာစားခြင်းနှင့်ရှောင်ကြဉ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဦး တည်ချက်သော့များမှတဆင့်ရွေ့လျားခြင်း၊
တစ် ဦး Spectre နှင့်အတူတိုက်မိတဲ့အခါ စွန် သေသွားပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ကစားသမားတွင်နောက်ထပ်အပိုနှစ်မျိုးရှိသည်, မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေဘားတွင်ပြသလျက်ရှိသည်။ သင်အသက်ဆုံးရှုံးပြီးအပိုအသက်တာကိုအသုံးပြုပါက၊ သေဆုံးသည့် အချိန်မှစ၍ အဆင့်တွင်ကျန်ရှိနေသောဆေးပမာဏကိုမပြောင်းလဲပါ စွန်လူတိုင်းသည်အဆင့်၏ကန ဦး အခြေအနေသို့ပြန်သွားသည်။
ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးတွင်စင်မြင့် (သို့မဟုတ်ဂိမ်း) ကိုဖြည့်ရန်၊ ကျန်ရှိနေသေးသောတက်ဘလက်များကိုသာစိတ်ပူရန်လိုအပ်သည်။ ကစားသမားသည်ကစားသမားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြင့်အသက်ဆုံးရှုံးသောအခါကစားပွဲကိုရှုံးသည်။
အဆိုပါဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများ၏အမြန်နှုန်းနှင့် စွန် အတိအကျအတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်မူရင်းဂိမ်းလိုပဲ၊ super-tablet တွေအနေနဲ့ဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများကို persentase factor ဖြင့်နှေးကွေးစေပြီး Pacman သူတို့ကိုမျိုလေ၏။
သူတို့စားသောအခါ "ghost of eye" သာကျန်ရှိတော့သည်။ ၎င်းသည် labyrinth ၏ဗဟိုသို့ပြန်သွားရလိမ့်မည်။ Pacman။ အဆင့်တိုင်း၌စူပါတက်ဘလက်လေးလုံးရှိသည်။ developer က super tablet များသည်မည်မျှကြာရှည်မည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုကိုက်စားသောတက်ဘလက်တစ်ဆယ်အချက်များတန်ဖိုးရှိသည်, စားသောစူပါတက်ဘလက်တစ်ခုစီကိုအချက်တရာတန်ဖိုးရှိနှင့်ကိုက်စား Spectre တစ် ဦး ချင်းစီတန်ဖိုးနှစ်ရာတန်ဖိုးရှိသည်။ ဂိမ်းသည်အနည်းဆုံးအဆင့် (၂) ဆင့်ကြာရမည်။
ဂိမ်းဖန်တီးစဉ် Toru Iwatani သည်အမျိုးသမီးပရိသတ်များအားအကြမ်းမဖက်သောအကြမ်းဖက်ပုံစံဖြင့်ဆွဲဆောင်ချင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လင့်ကစားဂိမ်းများသည်အထီးကျန်ဆန်သောနေရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, developer အသစ်တစ်ခုကိုအခြားရွေးချယ်စရာ option ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။
သို့သော်မမျှော်လင့်ဘဲဖြေရှင်းနည်းထွက်ပေါ်လာသည်။ Pac-Man ၏အောင်မြင်မှုသည် Crazy Otto ဂိမ်းကိုဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ တူညီသောဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်မူလဇာတ်ကောင်အမျိုးသမီးပုံစံတို့ဖြင့်ဂိမ်းသည် Namco နှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။
ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Pac-Man ကိုအခွင့်အရေးယူထားတဲ့ Midway မှာ နောက်ဆုံးမှာ Crazy Otto ကိုဝယ်ပြီး Ms. Pac-Man ဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာထုတ်ဝေလိုက်တယ်။ ဒီဂိမ်းကအသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ပိုပြီးမြန်နှုန်းနဲ့တူဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆောင်ခဲ့လေ၏။
ဂိမ်းများအောင်မြင်ပြီးမကြာမီတွင်ထိုဂိမ်းသည်အခြားမီဒီယာများတွင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာဇာတ်ကောင်သည်ကာတွန်းစီးရီးအတွက်ဗားရှင်းကိုရရှိခဲ့သည် Pac-man အဖျား။ ဒီဇိုင်းကို Hanna-Barbera က Flintstones နှင့် Jetsons ကဲ့သို့သောရိုးရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်တာဝန်ယူသည်။
ဒီအပြင်, ဇာတ်ကောင် ၏ပထမ ဦး ဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့သည် ဂိမ်းတွေကက။ ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာချိန် မှစ၍ အရုပ်များ၊ တီရှပ်များ၊ ကျောပိုးအိတ်များနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများကိုတံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာမီဒီယာအပြင်ဘက်တွင်အများဆုံးမှတ်မိဂိမ်းအမည်များတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ဂိမ်း၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်အပေါ်သက်ရောက်မှုမှာ GTA ၏စာရေးသူများကပင်ဤဂိမ်းသည်တူသည်ဟုပြောခဲ့သည် စွန်။ developer များအဆိုအရအဆိုပါဂိမ်း ၂ ခုသည်သူ၏ပြိုင်ဘက်များ (ရဲ / သရဲ) ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေစဉ်မြေပုံပေါ်ရှိလူ (pedestrians / tablet) တွင်ဇာတ်ကောင်များတိုးတက်လာခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
၁၉ ရာစုရှစ်ဆယ်မှမူလဂိမ်းသည်ဂိမ်းများစုစည်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် ခေတ်သစ်အနုပညာနယူးယောက်မြို့ပြတိုက်။
Pac-Man ပါဝင်တဲ့ပထမဆုံးဂိမ်းပါ ဒြပ်စင်အားဖွငျ့ယာယီပါဝါစက်ပြင်။ Popeye ရဲ့ဟင်းနုနွယ်ရွက်နဲ့ဆက်ဆံရေးကဒီအတွေးကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။
ဂိမ်းထဲမှာပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ချင်းစီတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပါတယ်။ ဂျပန်ဘာသာဖြင့်သူတို့၏အမည်များကိုကြည့်သောအခါဤအချက်သည်ပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်။ အနီရောင် oikake (Stalker), Machibuse ပန်းရောင် (ကင်းထိုး), Kimagure အပြာ (မတည်မငြိမ်) နှင့် Otoboke လိမ္မော် (မိုက်မဲသော) ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် Blinky၊ Pinky၊ Inky နှင့် Clyde စသဖြင့်ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။
ဒီဂိမ်းကအဆုံးမရှိပေမယ့်သင်ပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ပါဝင်သည် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲအဆင့်နှစ်ရာငါးဆယ်ငါးခုပြီးအောင်လုပ်ပြီးဂိမ်းထဲမှပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုစုဆောင်းပါ။ ဒီအပြင်, တစ်ခုချင်းစီကိုဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများကိုပါဝါ -up, အလုပ်တစ်ခုစီနှင့်အတူစားသုံးရမည်ဖြစ်သည်။
ဂိမ်း၏အခွင့်အရေးကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက် Google သည်နှစ် ၃၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်တွင် Pac-Man ၏ကစားနိုင်သောဗားရှင်းကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။